चीन सुरक्षित, विश्वसनीय र लिफ्ट ढोका प्यानल कारखाना र आपूर्तिकर्ताहरु लाई स्थापित गर्न को लागी सजिलो Tianhongyi
Tianhongyi लिफ्ट ढोका प्यानल अवतरण ढोका र कार को ढोका मा विभाजित छन्। जो लिफ्ट को बाहिर बाट देख्न सकिन्छ र प्रत्येक भुइँ मा तय गरीन्छ ल्यान्डि doors ढोका भनिन्छ। यसलाई कारको ढोका भनिन्छ।
Tianhongyi लिफ्ट ढोका प्यानल अवतरण ढोका र कार को ढोका मा विभाजित छन्। जो लिफ्ट को बाहिर बाट देख्न सकिन्छ र प्रत्येक भुइँ मा तय गरीन्छ ल्यान्डि doors ढोका भनिन्छ। यसलाई कारको ढोका भनिन्छ। लिफ्ट अवतरण ढोका को उद्घाटन र बन्द कार को ढोकामा स्थापित ढोका ओपनर द्वारा महसुस गरीन्छ। प्रत्येक भुइँ ढोका एक ढोका लक संग सुसज्जित छ। ल्यान्डि door ढोका बन्द भएपछि, ढोका लक को मेकानिकल लक हुक संलग्न छ, र एकै समयमा अवतरण ढोका र कार को ढोका बिजुली interlocking सम्पर्क बन्द छन्, र लिफ्ट नियन्त्रण सर्किट जोडिएको छ, तब लिफ्ट चल्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। कार ढोका सुरक्षा स्विच सुनिश्चित गर्न सक्छ कि लिफ्ट सामान्य रूप मा संचालित गर्न सक्दैन जब ढोका सुरक्षित ठाउँ मा बन्द छैन वा बन्द छैन। ल्यान्डि door ढोका सामान्यतया ढोका, गाइड रेल फ्रेम, चरखी, स्लाइडिंग ब्लक, ढोका कभर, सिल र अन्य घटक बाट बनेको छ। हामी यसलाई ढोका निर्माता, ढोका प्यानल चौडाइ, ढोका प्यानल उचाई, र ग्राहक द्वारा प्रदान गरीएको ढोका प्यानल को सामग्री अनुसार बनाउँछौं। हामी पनि तपाइँको स्केच को अनुसार नयाँ डिजाइन बनाउन सक्छौं। मुख्य ढोका खोल्ने तरीका हो: केन्द्र विभाजन, पक्ष विभाजन डबल गुना, केन्द्र विभाजन डबल गुना, आदि सबै भन्दा सामान्य केन्द्र विभाजन हो, उद्घाटन चौडाइ 700 ~ 1100mm छ, र उद्घाटन उचाई 2000 ~ 2400mm छ। रंग, स्टेनलेस स्टील, दर्पण, नक़्कस, टाइटेनियम सुन, गुलाब सुन, कालो टाइटेनियम, आदि क्रम मा ढोका मेकानिकल शक्ति र कठोरता को एक निश्चित डिग्री छ बनाउन को लागी, बलियो पसली को पछाडि प्रदान गरीन्छ: हामी विभिन्न रंगहरु प्रदान गर्न सक्छौं। ढोका यसको शक्ति, स्थायित्व र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न। लिफ्ट ढोका कभर सानो ढोका कभर र ठूलो ढोका कभर मा विभाजित छन्। सामान्यतया, एउटा सानो ढोका कभर एक कारखाना मानक को रूप मा शामिल हुनु पर्छ। यो ढोका कव लिफ्ट कार र बाहिरी पर्खाल को बीच को अंतर कभर र लिफ्ट कोठा सुशोभित गर्न को लागी स्थापित छ। यो सामान्यतया स्टेनलेस स्टील बाट बनेको हुन्छ। ढोका कव लिफ्ट सजावट ढोका आवरण को एक नयाँ प्रकार हो। यो विभिन्न सामाग्री बाट बनेको छ, न केवल स्टेनलेस स्टील, तर नक्कली ढु patterns्गा बान्की संग अन्य सामग्रीहरु पनि उपलब्ध छन्; जस्ता स्टील एकीकृत ढोका कभर सहित, नैनो ढु plastic्गा प्लास्टिक ढोका कभर र यति मा। एक हात मा, यो लिफ्ट सजावट मा एक भूमिका खेल्न सक्छ, र अर्कोतर्फ, यो नागरिक निर्माण प्रक्रिया मा छोडिएको समस्याहरु को लागी बनाउन सक्छ; उदाहरण को लागी, यदि पर्खाल र सानो लिफ्ट ढोका फ्रेम को बीच दूरी ठूलो छ, यो एक ढोका कभर संग सजाउनु आवश्यक छ।
1. प्रभाव प्रतिरोध: लिफ्ट कार को ढोका "GB7588-2003" मा 5cm*5cm को दायरा भित्र हुनु आवश्यक छ, 300N को एक स्थिर बल र 1000N को एक प्रभाव बल संग (लगभग एक सामान्य वयस्क गर्न सक्ने बल को बराबर exert, तेसैले यो एक लिफ्ट को रूप मा प्रयोग गरीन्छ ढोका कभर क्षति प्रतिरोध र भारी वस्तुहरु, बिजुली सवारी साधन, साइकल, आदि लिफ्ट मा प्रवेश वा बाहिर निस्कने को कारण बाट बच्न को लागी प्रतिरोध प्रतिरोध को एक समान डिग्री हुनु पर्छ)।
2. पनरोक र ज्वाला retardant: लिफ्ट एक विशेष उपकरण हो। लिफ्ट आगो को घटना मा प्रयोग गर्न को लागी अनुमति छैन। जे होस्, सीढी हल को एक महत्वपूर्ण भाग को रूप मा, लिफ्ट ढोका कव समग्र आगो सुरक्षा स्तर सुधार गर्न को लागी सम्बन्धित ज्वाला retardant आवश्यकताहरु (V0 वा माथी) लाई पूरा गर्नु पर्छ; एउटै कारण को लागी, यदि यो एक आर्द्र वातावरण को सामना गर्दछ वा छाला छ, यो विरूपण वा क्र्याक बिना २४ घण्टा को लागी पानी मा भिजाउनु पर्छ, ताकि समग्र वातावरण को सुरक्षा बृद्धि गर्न को लागी।
३. सुरक्षा: सार्वजनिक स्थानहरुमा र बाहिर एक भीड स्थान को रूप मा, सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो। लिफ्ट ढोका कभर सुरक्षा खतरा बिना विनाशकारी बल द्वारा हिर्काए पछि भाँच्न र क्षति गर्न को लागी सक्षम हुनुपर्दछ, र पनी कहिल्यै खस्नु हुँदैन ताकि जीवन र सम्पत्ति लाई खतरा वा क्षति नहोस्।
4. सेवा जीवन: एक सार्वजनिक सुविधा को रूप मा, त्यहाँ धेरै मानिसहरु/सामानहरु हरेक दिन प्रवेश र लिफ्ट बाट बाहिर छन्, जसले ठूलो क्षति र लिफ्ट ढोका कभर को घर्षण को कारण हुनेछ। लिफ्ट ढोका कभर को सामग्री यसको सेवा जीवन बढाउन को लागी उच्च मापदण्ड पूरा गर्न को लागी आवश्यक छ। लिफ्ट को सेवा जीवन १ 16 बर्ष भन्दा कम छैन। ढोका कभर को एक घटक को रूप मा, यो लामो समय सम्म लिफ्ट को रूप मा प्रयोग गरिनु पर्छ।
5. पर्यावरण संरक्षण: लिफ्ट ढोका कभर को क्षेत्र सानो छ, तर संख्या ठूलो छ। आधुनिक समाज मा जहाँ पर्यावरण संरक्षण विषय हो, हामी वातावरण मैत्री सामाग्री को बहुआयामी आवेदन को लागी कल गर्नु पर्छ। मातृभूमि र हरियो संसार को महान नदीहरु र पहाडहरु लाई योगदान गर्नुहोस्।
Simple. सरल प्रक्रिया: बढ्दो श्रम लागत को कारण, छिटो भेला भवनहरु, फर्नीचर र लिफ्ट ढोका कभर को एक पनी पठाइएको छ, जो न केवल मानव घण्टा र श्रम लागत बचाउँछ, तर प्रक्रियाहरु लाई तदनुसार कम गर्दछ, ताकि हासिल गर्न को लागी उच्च दक्षता र ऊर्जा बचत कार्य दक्षता। आधुनिक समाज को आवश्यकताहरु लाई अनुकूलन।
उत्पादन भण्डारण र यातायात
अघिल्लो: अतुल्यकालिक गियर कर्षण भाडा लिफ्ट
अर्को: मेसिन रूमलेस को यात्री कर्षण लिफ्ट
स्वचालित लिफ्ट ढोका
डबल ढोका लिफ्ट
लिफ्ट ढोका जाम
लिफ्ट ढोका अपरेटर
ढोका लिफ्ट स्विंग गर्नुहोस्